Ịchọrọ iwepụ Data Web? Nbudata ihe omuma nke Web Data Extraction Software
Ị nweta ozi sitere na weebụsaịtị bụ usoro mgbagwoju anya nke ụlọ ọrụ dị iche iche na-arụ. Ndị na-ahazi na-achọ ịnakọta mpịakọta data na ụfọdụ isiokwu nwere ike irite uru site na mmemme ndị a:
1. Onye nchapu
Onye na-ekpochapu bụ nchịkọta Chrome nke nwere ọtụtụ njirimara. Ọ bụghị naanị ihe nchịkọta data kama onye na-eme nchọpụta nke isiokwu - panuelo americana. Ọ bụghị ngwá ọrụ na-enweghị atụ nke nwere ike mbupụ data gị gaa na akwụkwọ mpịakọta Google. A ga-edepụta data gị ma debe ya na mpempe akwụkwọ ya, ekele OAuth maka ime ka o kwe omume. Onye na-ekpuchi ihe dị ukwuu maka ma onye mmemme ma onye na-abụghị onye mmemme.
2. Weebụ Web
Nchịkọta Weebụ na-abịa site na nhọrọ dị iche iche nhazi na ọ bụ usoro mmeghe ntinye ihe omume. Edere ya na Java ma nata data sitere na weebụsaịtị ma nke di elu. Owuwe ihe ubi Web na-elekwasị anya na ibe weebụ XML ma ọ bụ HTML.
Ngwá ọgwụ bụ ihe ọzọ na-emepụta ihe ntanetị ọzọ . Ọ bụ usoro na-agba ọsọ zuru ezu na ọtụtụ atụmatụ na nhọrọ. Ntugharị na-arụ ọrụ ngwa ngwa wee nweta gị usoro data chọrọ. Enwere ike iji ya naanị mgbe ị tinyere Python na ngwaọrụ gị. Ọzọkwa, ịkwesịrị ịnweta nghọta bụ isi nke asụsụ a.
OutWit bụ otu n'ime ihe omume nchịkọta data kachasị mma na ihe bara uru. Ọ bụ nkwụsị Firefox na ibu nke ihe nhọta data. Mmegharị na-eme ka ọchụchọ weebụ gị dị mfe ma nyere aka na-enyocha site na ibe weebụ dị iche iche na-akpaghị aka.
6. Ogwe Ngwá Ọrụ Data
Ogwe Ngwaọrụ Data nwere ike imechi usoro nchịkọta data maka mfe. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịnakọta data sitere na ibe weebụ dị iche iche ma chọọ ntanetị ihe ọmụma, ị ghaghị ịnwale Data Toolbar.
Akụkụ kachasị mma nke iMacros bụ na ọ nwere ike ịmepụta ihe arụ ọrụ ugboro ugboro. Ma ị chọrọ iji ya na Firefox ma ọ bụ Google Chrome, iMacros na-akwado ihe nchọgharị niile ma nyere gị aka ịnyagharịa site na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ibe weebụ.Ọzọkwa, ọ na-enyere aka ịgbanwee tebụl weebụ ma depụta n'ime ozi bara uru.
9. Weebụ Weebụ Web
Nke a bụ usoro nchịkọta data nke nchịkwa nke na-arụ ọrụ dịka Dewit na Bubata. Ee. Google ihe ntanetị weebụ ezubere iji wepu data site na ederede na PDF. Ị ghaghị ịkọwapụta data ị chọrọ, na ngwá ọrụ a ga-enye gị akwụkwọ ndị ị chọrọ n'ime otu awa. Ị nwere ike ịchekwa data gị na Google Drive.
Nwepụ bụ ihe dị ọhụrụ ma ọ bụ ihe dị ịtụnanya na-ekpocha ihe nke na-akwado site na igwe na-amụta nkà na ụzụ. Ị nwere ike ịmepụta APIs na usoro a ma wepu otu mkpokọta weebụ n'ime sekọnd.